VaMann Vanoendeswa kuEquatorial Guinea Zvisiri Pamutemo
Kukadzi 01, 2008
Murume wechichena ari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yeEquatorial Guinea, VaSimon Mann, vakaburitswa muZimbabwe ndokuendeswa ku Equatorial Guinea, kuitira kuti vanotongwa nemhosva yavari kopemerwa.
Dare redzimhosva remuZimbabwe, rakapa mutongo wekuti VaMann vaendeswe ku Equatoria Guinea, magweta aVa Mann, akati achapikisa mutongo uyu. Gweta riri kumirira VaMann, VaJonathan Samkange, vanoti VaMann vakaburitswa munyika nechimbi chimbi vasingazive zviri kuitika, uye izvi zvakaitwa zvisiri pamutemo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Equatorial Guinea inyika inotyora kodzero dzevanhu, nokudaro VaMann havaifanirwi kuendeswa kunyika iyi. VaMann vanobva kuBritain, uye vakasungwa muna 2004 muHarare vachibva kuSouth Africa vari munzira yekuenda ku Democratic Republic of Congo.
VaMann vaida kutora zvombo zvavainge vatenga muZimbabwe, apo vakazosungwa.
Patience Rusere weStudio Seven aita hurukuro naVa Alec Muchadehama, nyanzvi munyaya dzemitemo, uye vari gweta, kuti tinzwe kuti vanofungeyi nemabatirwo aitwa VaMann.